“Magsafe နဲ့ တွဲသုံးလို့ရတဲ့ ကာဗာရှိလား?” – BARMASO
“Magsafe နဲ့ တွဲသုံးလို့ရတဲ့ ကာဗာရှိလား?” လို့မေးနေတာများလာလို့ တစ်ခါတည်း ဒီမှာပဲ မှန်မှန်ကန်ကန် ဘရိုတို့အားလုံး သိသင့်တဲ့အချက်အလက်လေးတွေကို ရှင်းပြပေးပါရစေ။
သေချာဖတ်ပြီးမှ Magsafe သုံးမသုံး၊ ဝယ်မဝယ်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါနော်။
(ပြောပြချင်တာကြာပြီ ဒါပေမဲ့ business အချင်းချင်း သွားတိုက်ခိုက်တယ်လို့ ထင်ခံရမှာဆိုးလို့.... အခုတော့ cus တွေ မေးလာတာတကယ်များလာလို့ဗျာ... တကယ်လည်း concerned ဖြစ်လာလို့ ရှင်းပြပေးတာပါခင်ဗျာ။)
"Magsafe" ဆိုတာ နည်းပညာတစ်ခုခုရဲ့ နာမည်မဟုတ်ဘူး။ Qi Wireless နည်းပညာပေါ်မူတည်ပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ iPhone နဲ့ compatible ဖြစ်တဲ့ wireless charger တစ်ခုရဲ့ နာမည်ပါ။
“Magsafe" = iPhone သီးသန့်အတွက် ဖြစ်တဲ့ အမြန်သွင်း Wireless Charger
နောက်တစ်ခုက Magsafe ရဲ့ 15w အားသွင်းမြန်နှုန်းကလည်း Apple ကနေ ကနဦး ထုတ်နိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ Wireless 15w မြန်နှုန်းက ဈေးကွက်မှာ ရှိနေတာ ၂ နှစ်နီးပါးရှိနေပြီ။ Baseus 15w wireless charger ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ စီက ရောင်းခဲ့တာက ပြီခဲ့တဲ့ နှစ်ကတည်းကပါ။
ပုံမှန် non-MFI third party wireless charger တွေထက် Magsafe က iPhone အတွက် ပိုလုံခြုံတယ်ဆိုတာကတော့ လုံး၀ သွားငြင်းလို့မရဘူး။ မြန်နှုန်းက Magsafe နဲ့ ယှဉ်လို့ရပေမဲ့ battery health ရဲ့ ထိခိုက်မှုက ပိုကြီးပါတယ်။
ကဲ့...... Magsafe ရဲ့ concept ကို အကြမ်းလေးသိပြီဆိုတော့-
Qi Wireless Standard အနေနဲ့ အားသွင်းဖို့ ကြားခံပစ္စည်း (plastic) အထူက 3mm အထူထိ လက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ပြောချင်တာက ဖုန်းကာဗာ အထူက 3mm အောက်ဆိုရင် Magsafe နဲ့ တွဲ သုံးလို့ရပါတယ်၊ အားသွင်းတာ ဝင်တယ်။ 3mm က ဘယ်လောက်ထူတာလဲလို့ မသိနိုင်ရင် 80gsm A4 စာရွက်ကို အရွက် ၃၀ ကို ထပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲ့အထူလောက်ပဲ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ wireless charger က Qi Standard အမှန်အကန်ဖြစ်ရမယ်။ Wireless Copper Coil အရမ်းကောင်းမှရမယ်။ Magsafe ဆိုတော့ QI Standard ရှိမရှိဆိုတာတော့ စိတ်ပူစရာမလိုဘူး။ ဖုန်းကာဗာ အရမ်းမထူရင် ဘယ်ကာဗာပဲဖြစ်ဖြစ် Magsafe နဲ့ သုံးလို့ရပါတယ်။ Magsafe နဲ့သုံးလို့ရမရ ဆိုတာက ဖုန်းကာဗာ quality နဲ့ မသတ်ဆိုင်ဘူး။ ကာဗာအထူအပါးနဲ့ သတ်ဆိုင်ပါတယ်။
Magsafe က ဖုန်းကဗာနဲ့သုံးလို့ရမရ ဆိုတာထက် ဖုန်းကာဗာနဲ့ သုံးသင့်မသုံးသင့်ဆိုတာက ပိုပြီး ဂရုစိုက်သင့်ပါတယ်။
Qi Wireless လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ ကြားခံအထူက 3mm ဖြစ်ပေမဲ့ ကြားခံထူလေးလေး အားသွင်းတတ်ရောက်မူက နည်းလေလေ၊ အားသွင်းတတ်ရောက်မူက နည်းလေလေ wireless က အားထုတ်ပေးရတာ ရုန်းရလေလေပဲ၊ အားသွင်းတာ ရုန်းရလေလေ ဖုန်း နှင့် charger နှစ်ခုလုံးက ပူလေလေပဲ။ ပူလေလေ battery health ကို ထိခိုက်လေလပေဲ။ လေလေလေလေ.....ပဲ......
နှောက်နေတာမဟုတ်သလို ခြောက်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ကျေးဇူးပြု၍လည်း မငြင်းသေးပါနဲ့။ အရင် သုံးကြည့်ပါ။ Wireless Charging ရဲ့ တဘောတရားကို အရင်လေ့လာပြီး လက်တွေ သုံးပြီးမှ ငြင်းပါနော်။
"ဟေ့... မင်းပြောသလိုဆိုရင် Magsafe နဲ့ အားသွင်းတိုင်း ကာဗာဖြုတ်ရမှာလား?"
Battery Health ကျတာ နှေးချင်တယ်ဆိုရင် မှန်ပါတယ်။ ဘရို။
Wilress charging အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းနဲ့ charger နဲ့ ကပ်လေလေ မှန်ကန်လေလေပဲ။ ဒီထက် အရေးကြီးတာက ကပ်ထားတဲ့ပုံစံက copper coil နဲ့ center ကွတိကျရမယ်။ မဟုတ်ရင် Magsafe က ဘာလို့ သံလိုက်ပါတာလဲ။ ဟုတ်တယ်ဟုတ်?
Magsafe က ဘာကို ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ထားတာလဲ။"
ဖုန်းကာဗာ မပါပဲ သုံးခိုင်းတာလေ။ ဘယ်အချိန်က ဖုန်းကာဗာ အထူကြီးတတ်ပါလို့ Apple က တိုက်တုန်းဖူးလို့လဲဗျာ။ ထက်ပြီး... wireless charging က trend တစ်ခုဖြစ်နေပြီ bro. ခတ်အလိုက်နဲ့ သွားရမှာပေါ့။
"အဲ့ဒါဆိုရင်.......တချို့ ဖုန်းကာဗာမှာ iPhone 12 Series ရဲ့ original silicone case လိုမျိုး နဂိုကတည်းက wireless charging ရနိုင်ဖို့ coil လေး built in ပေးထားတဲ့ဟာရော Megsafe နဲ့ တွဲသုံးလို့ ပိုအဆင်ပြေတယ်မလား?"
ဟုတ်တယ်။ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ မှတ်ထားပေးပါ။ wireless နဲ့ အားသွင်းတဲ့အချိန်မှာ ကာဗာတတ်ပြီး အားသွင်းတာထက် မတတ်တာက battery အတွက် ပိုကောင်းပါတယ်။
ဖုန်းအားသွင်းတိုင်း ကာဗာဖြုတ်ပြီး သွင်းမယ်ဆိုရင် ဝယ်သင့်ပါတယ်။ Apple ရဲ့ new product ဆိုတော့လေ ပိုက်ပိုက်တတ်နိုင်ရင် ခေတ်မှီအောင်တော့ စမ်းသုံးကြည့်ရမှာပေါ့။
ပြောချင်တာတွေ ထက်ရှိသေးတယ်... အများကြီးပဲ....နောက်ရက်မှ ရေးမယ်လေ....
Justaconcerned message for BARMASO Lovers........
ဈေးကွက်မှာ လုံးဝမရှိခဲ့ဖူးတဲ့ Andriod ဖုန်း မှန်မကွဲBack to Just SharingiBARMASO Skin နှင့် သက်ဆိုင်သော tutorial video များ။